VICTOR အမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်စွမ်းအင်သုံးရေစုပ်စက်ကိုနိုင်ငံအမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်, 2″,3″,4″ ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်အချင်း, ဒါဟာစိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်းများအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်, ရှုခင်း, ကြီးမားသောareaရိယာဆည်မြောင်း, ရေကြီးမှုကာကွယ်ရေး, ရေနုတ်မြောင်း, နှင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးစသည်တို့.
ဒီဇယ်စွမ်းအင်သုံးရေစုပ်စက်တစ်ခုလုံးကိုပြုလုပ်ထားသည်3အစိတ်အပိုင်းများ ,ဦး ခေါင်းစုပ်စက် ,မောင်းနှင်သောစွမ်းအား ,frame.Pump head သည် self-priming centrifugal pump.VICTOR အမှတ်တံဆိပ် centrifugal pumps ကိုတရုတ်စံနှုန်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်သည်။,အရာအဓိကအားဖြင့်လှုံ့ဆျောထားရှိရေး,ထည်, တံဆိပ်ခတ် ,ကိုယ်ခန္ဓာစသည်တို့ကို ,ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေသို့မဟုတ်အဘယ်သူ၏ဂုဏ်သတ္တိများရေဆင်တူအခြားသူများသိရှိစေရန်အဘို့အသင့်လျော်ပါတယ်. အသုံးပြုသူအမျိုးမျိုးအတွက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်းစုပ်စက်ကိုလျှပ်စစ်မော်တာသို့မဟုတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်သို့မဟုတ်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်, ပါဝါစက်တစ် ဦး နားချင်းဆက်မှီခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်စုပ်စက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ , အခြားတစ်ခုမှာပါဝါစက်နှင့်စက်ကိုစက်သီးဖြင့်လှည့်သည်။ ရေစုပ်စက်၏စွမ်းအင်မှာဒီဇယ်အင်ဂျင်သို့မဟုတ်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ဖြစ်သည် ,required.the ဆည်မြောင်းစုပ်စက်ဘီးနှင့်လက်ကိုင်နှင့်အတူကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်အဖြစ်အသုံးပြုသူကိုရွေးချယ်နိုင်သည် ,ဒါကြောင့်ဒီလယ်ယာမြေဆည်မြောင်းစုပ်စက်ကိုဘယ်နေရာမဆိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လွယ်ကူစေတယ်, အစာရှောင်ရေထွက်ယူ, မကြာမီကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ပါ,စုဝေးနှင့် dis dis ကိုလည်းလွယ်ကူသည်
1.ကျယ်ပြန့် application ကို:သစ်သီးပင်များကိုရေလောင်းရန်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေစုပ်စက်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်, မြေနှင့်လယ်ယာမြေ
4.စိတ်ချရသော:ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ,စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော,စက်မှုတံဆိပျနဲ့ထုပ်ပိုးတံဆိပျ၏ Pumps ရရှိနိုင်ပါသည်
7.ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း:ကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သောနှင့်ခံနိုင်ရည် ,ပေါများ optional ကိုအစိတ်အပိုင်းများ, ထိုကဲ့သို့သောအစာရှောင်ခြင်း coupler အဖြစ်, ပိုက်ညှပ်, စသည်တို့.
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်းစုပ်စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
မော်ဒယ် စီးဆင်းမှု မသည် မြန်နှုန်း ပါဝါ Dia အတွင်း / ထွက်.
VT80-80-45 45m³ / h 45မီတာ 2600r / မိနစ် 4.4HP 2”,2.5”,3”
VT80-80-125 80m³ / h 30မီတာ 2600r / မိနစ် 4.4HP 3”
VT80-80-30 80m³ / h 30မီတာ 2600r / မိနစ် 4.4HP 2.5”,3”
VT100-120-38 120m³ / h 38မီတာ 2600r / မိနစ် 5HP 4”
VT75-50-60 50m³ / h 60မီတာ 2600r / မိနစ် 4.4HP 2.5”,3”
လျှောက်လွှာ:စိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်း, ရှုခင်း, ကြီးမားသောareaရိယာဆည်မြောင်း, ရေကြီးမှုကာကွယ်ရေး, ရေနုတ်မြောင်း, စသည်တို့